galmudugnews.com » Daawo Video Ciidanka Dowladda oo Meyd ku dul fadhiya
Home » WARARKA » Daawo Video Ciidanka Dowladda oo Meyd ku dul fadhiya Daawo Video Ciidanka Dowladda oo Meyd ku dul fadhiya admin on
Mar 13th, 2013 //
No Comment Views 1610502
Video Muuqaal ah ayaa lagu helay koox ka tirsan Ciidamada Federalka Somalia mar ay sawiro iskaga qaadayeen meyd ku dhintay dagaal oo ay sheegeen inay yihiin shaqsiyaad ka mid ahaa Xooggaga Alshabab. Ciidankan oo uu wehliyo madaxoodii unitka ayaa la cadeeyay inay ka tirsan yihiin ciidan dhawaan lagu soo tababaray dalka Kenya kana tirsan qeybta sahanka ee Gaaska Hilaac, gobolka Gedo.
“Ficilkasta oo lagula kaco meyd, saaxiib ha ahaado ama cadow, waa sharaf ka dhac aanan laga filan Karin Ciidan Qaran” waxaa yiri, Hassan Omar oo ah madaxa Jaalliyada Somalida, Gobolka Ohio oo ahaan jiray sarkaal Ciidamada qalabka sida ka mid ah burburkii dowladdii dhexe ka hor.
Koshin Farah, oo ah Qareen udooda xuquuqda insaanka una shaqeeya ururka xuquuqda insaanka udooda “Sade International” oo fadhigiisu yahay Columbus, Ohio ayaa ku tilmaamay dhacdadaan mid laga naxo wuxuuna codsadey in la baaro oo kuwii dambiga galeyna la soo saaro Maxkamad Qaran.
Gobolka Gedo ayaa ah gobol waa hore la hilmaamay, oo ay horukacintiisa ay liidato. Inkastoo ay dowladda dadaal ugu jirto inay isticmaasho ciidamo Gedo laga abaabulay si ku awood ugu yeelato jubbooyinka, haddana, waxay ku guuldareysatay inay wax ka qabato baahida baahsan ee Gobolka ka jirta sida dhinacyada waxbarashada, horumarinta adeega bulshada. Si kastaba ha ahaatee, shaqsi madax oo dowladdaan cusub ka tirsan ayaanan wali gobolkaa booqasho ku gaarin. Raga matala gobolka ee ku jira baarlamaanka ayaa umuuqda kuwa aanan dan badan ka leheyn Gobolkan. Dowladda ayaa u muuqata mid mashaariicda iyo dib udhiska dalka la beegata magaalo madaxda iyo gobolka Puntland oo kaliya. (Fiiri heshiiskii dhawaan la saxiixay)
Musse Farah Jiilaal
SADE International Press Office Press@Sade.org.so PressSade@gmail.com
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 136640 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31740 hitsContact US - 30230 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 25779 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25487 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25006 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23770 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 22799 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22237 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 21820 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21181 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 20894 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 20797 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20512 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19770 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19686 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19062 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18351 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17663 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17455 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17406 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16797 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16480 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15415 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15249 hits Home Contact US